ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: သံတူကြောင်းကွဲ (ဒုတိယအကြိမ်)
ခများရုံးခန်းထဲ ကို ခများ စီအီးအို(၀ါ) ဥက္ကဌ လာလို့ခများ ထမရပ်ဘဲ နေနေတဲ့ ပုံများရှိရင် တင်ပေးပါဗျာ။ သေချာပလေ့စေ၊ ကိုပေါလဲမှန်ရမယ်။ လက်ရှိ စီအီးအိုလဲ မှန်ရမယ်ပေါ့ဗျာ။
ငါ့အလုပ် ငါလုပ်နေတာဘဲလို့(အပိုတွေပါလို့ကိုပေါနေရဲသလား မမေးရက်ပါ)။
ကိုပေါ ဘယ်လိုနေသလဲဆိုတာ သက်သေပြပေးပါလား။
တကယ်မှန်ရင် ကိုပေါ ကို ကျနော့ကျေးဇူးရှင်မိဘ၂ပါး ဓာတ်ပုံနဲ့ အတူတူ ဘုရားခန်းထဲ ချိတ်၊
အယင် ပို့ စ်မှာ တောရေးတောင်ရေးလုပ်နေတဲ့ ကိုကို၊မမ များဓာတ်ပုံများကိုလည်း တင် ပေးစေလိုပါတယ်။ ငါတို့ဂလို ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးလုပ်နေတာကွ ဆိုတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ ကို ကန်တော့ချင်လို့ ပါ။
ကျနော် မောင်သန့် ပါ။
၁၉၆၀~~၇၀ ၀န်းကျင် က ဟစ်ပီယဉ်ကျေးမှု အငွေံ့အသက်တွေ ကျန်နေတာလား။ မော် ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး အငွေ့ အသက်လား၊ ရရ မရရချ ဆိုတဲ့ ရုပ်ကြမ်းဝါဒ အငွေ့ အသက်လား။
စလုံးမှာအနေကြာလို့တကိုယ်ရေဦးစားပေးဝါဒ ကရာစီ(Kaisu---စာလုံးပေါင်းမသေချာပါ) ၀င်သွားတာလား။ မတွေးတတ်တော့ဘူး။ သြော် မတွေးအပ်တော့ဘူး။
ေ--ာက်ရေးမပါပေမဲ့ ကျတ်ဖွတ်တွေ အာဏာမရ ရအောင် လုပ်နေတဲ့ ခုလို သမယ မှာ ဖျာခင်းတာဘဲ ပြောပြော၊ပွဲဆူအောင်ဘဲ ပြောပြော၊ လမ်းလွှဲ အောင် ကိုပေါ လုပ်နေတယ် ဆိုတဲ့ သံသယတော့ ၀င်လာပါပီဗျ။
ယခင့် ယခင် နိုင်ငံရေးပို.စ်လေးတွေ ကိုပြန်ပြန်ဖတ်ပီး--အဲဒီသံသယ ကို ဖြေနေလျက်ပါ။
Comment သိပ်များရင်ေ--ာက်တလွဲ ဂုဏ်ယူတတ်တာ ခွေးစေတမန် ကို ၀င်ဖတ်ရင် သိပါတယ်။ပိတောက်မြေ--လအော်လအယ်ရောပေါ့ဗျာ။
သံတူကြောင်းကွဲ ။ ကိုပေါ ကို(သိပီးသားဖြစ်မှာပါ)တခု တင်ပြချင်ပါတယ်။
သိစမ့်မြင်နှံ့--ဆိုတာ ပုဂံခေတ် အသုံးအနှုန်းပါ။
သဗ္ဗညုတ--ဆိုတဲ့ ပါဠိ ကို မြန်မာမှုပြုထားတာ။
ကျနော်တို့ မှာ ဒီလောက်ပြည့် စုံတဲ့ ဘာသာစကားရှိပါတယ် ဗျာ။
ရောထွေးမလုပ်ပါနဲ့ ။ bye My reverend ! အမေရိကားမှာသုံးလို့ ရတာပေါ့။ အားလုံး အင်္ဂလိပ်လို ဟာကိုး။
ငါ့ အဖေရင်း ကိုတောင် ပေါတာကြီး ခေါ်ခဲ့သေးတာဘဲ။ ဦးလေး ပေါသန့် ကြီး ခေါ်ရင်တော့ ပါးဖြတ်ရိုက်ပစ်မှာ။ မတွေ.ပစေနဲ့ တော့။ဟီးဟီး။
မောင်သန့်.... အခုမှ အပြင်က ပြန်ရောက်လို့ ဘလော့ဂ်ကို ဖွင့်ကြည့်မိတယ်။ တနာရီကျော်ကျော် ကျနော့်ဘလော့ဂ်ထဲမှာ ကွန်မင့်တွေ ဆက်တိုက်ရေးသွားတာကိုတွေ့ရတော့ မိတ်ဆွေရဲ့ အားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်ဗျိုး။း-)
ကျွန်တော်မြင်တာတော့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပက်သက်လာရင် ကိုပေါလက်ရှောင်သင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်.. နာမည်ကြီးတွေကို ဖဲ့ပြပီး နာမည်ယူချင်စိတ်က ခိုင်ခိုင်လုံလုံ အကြောင်းပြချက် ဆိုရင်တောင် နားလည်ပေးလို့ ရပါသေးတယ်.. ခုတော့ စိတ်လေစရာပါလေ.. ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လက်မခံတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဘာလို့များ ပဏ္ဍာယူပီး ပြောနေမလဲဗျာ..
စိတ်ရင်း သိပ်မှန်ပါတယ်ဆိုပီး ကိုယ့်ရှေ့မှာ မလေးမစားပြောမယ်.. ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း နေမယ်.. အဲဒီအပြုအမူတွေဟာ ရိုင်းပြကြောင်း အဲဒီလူကိုယ်တိုင်က သိသိကြီးနဲ့ လုပ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ကိုပေါ နှစ်မြို့နိုင်မယ် ထင်ပါလား.. ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ ကြိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါတွေဟာ ရိုင်းမှန်းသိရက်နဲ့ ကိုယ့်ကို လာလုပ်ပြနေတဲ့လူဟာ စိတ်ရင်းမှန်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲ..
ဘယ်လိုလုပ်ရပ်ဟာ ယဉ်ကျေးတယ်.. ဘယ်လိုလုပ်ရပ်ဟာ ရိုင်းစိုင်းတယ်ဆိုတာ သိထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ဆီက ထွက်လာတဲ့ အပြုအမူဟာ သူ့အတွင်းစိတ်ကို အများကြီး ကိုယ်စားပြုပါတယ်.. သိနားလည်ရက်နဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အပြုမူနဲ့ ပြောဆိုနေပီဆိုရင် ဒါဟာ အတွင်းစိတ်ရိုင်းစိုင်းနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ တစ်ထစ်ချနီးပါး ပြောလို့ရပါတယ်.. ပီးတော့ အပြောအဆိုပေါ် မူတည်ပီးလဲ လူယဉ်ကျေးလား.. ရိုင်းစိုင်းတာလားဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်တာဟာ မြန်မာမှမဟုတ် တကမ္ဘာလုံး သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြတာပါပဲ.. လူသတ္တ၀ါရဲ့ အကျင့်သတ်မှတ်ချက်လို့တောင် ဆိုနိုင်မယ် ထင်ရဲ့ဗျာ.. အဲဒီသူတို့ သန်ရာ သန်ရာ သတ်မှတ်ကြတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းဟာလည်း ယဉ်ကျေးမှုဆိုထဲက ရိုင်းစိုင်းမှု မဟုတ်တာကြောင့် လေးစားစရာကောင်းတဲ့.. နှစ်လိုစရာကောင်းတဲ့ အကျင့်အကြံတွေချည်းပဲလို့ ကျွန်တော်တော့ မြင်တာပါပဲဗျာ..
" ဆရာ Paw က နွားပလာတာကျွေးသကိုးဗျ ယောင်ယောင်အိုးတွေ အဖက်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ .. ကာလကုန်တယ် သွားပေါ့ "
Your too thick skin Ko Paw!
"အယင် ပို့ စ်မှာ တောရေးတောင်ရေးလုပ်နေတဲ့ ကိုကို၊မမ များဓာတ်ပုံများကိုလည်း တင် ပေးစေလိုပါတယ်" (မောင်သန့် ).
Pls show me your photo too.
Kindly accept crystal clear and cool Metta !
kaung to me
show details 10:40 PM (15 hours ago)
kaung has leftanew comment on your post "သံတူကြောင်းကွဲ (ဒုတိယအကြိမ်)":
ကိုပေါက အရင်နာမည်ကြီး ဆရာတော်တပါးလို ဖြစ်နေပြီ။ ပထမတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာသန့် ရှင်းရေးအတွက် ရိုးရာအစွဲလမ်း အမှားတွေ၊ နတ် တွေကို တိုက်ခိုက်ရာက တဖြေးဖြေး နာမည်ရလာပြီး မြန်မာပြည်မှာ ထင်ရှားခဲ့သမျှ ဆရာတော်ကြီးတော်ကြီးကိုပါ (စာပေကျန်းဂန် အထောက်အထား နဲ့ မညီပဲ) ကိုယ်ပိုင်အယူအဆတွေ၊ အထင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာတော့ သံဃာမဟာနာယက အဖွဲ့ ကရှင်းခိုင်းလို့ ဗမာပြည်က ပြေးရတဲ့ အခြေအနေရောက်ခဲ့တယ်။
ကိုပေါလဲ စာပေဖတ်တာများပြီး (ညှိမယူတတ်ရင်) ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်မကောင်းတဲ့ ရိုးရာအစွဲမှားတွေပယ်ရင်းနဲ့နောက်တော့ ကောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေပါ တော်လှန်ချင်တဲ့ပုံဖြစ်လာတတ်တယ်သတိထားပါ။ (အားလုံးရဲ့ တရားခံက ငါသိ ငါနားလည် ငါတတ် ဆိုတဲ့ မာနလေး က စ တာပဲ)။
စလုံးရောက်တဲ့ တချို့ လူငယ်တွေ ဘာသာတရား ကင်းလွတ်ကုန်တာ အဓိက အဲဒီအချက်ပဲ။ ဘာသာရေးအခြေခံမရှိခဲ့ပဲ အယူအဆ အားလုံးကို သိသလောက်လေးနဲ့တွေးခေါ်ရာက ဘာသာမဲ့တွေ၊ အစွယ်ကောင်းရင် ဘာသာပြောင်းတာတွေဖြစ်ကုန်တာ ဒီအချက်ပဲ။
အဓိက message က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်မယ်ဆို သတိထားဖို့ ပါ။ ကောင်းတဲ့ အချက်လေးတွေ အရင်းထဲက ပါသွားမှာစိုးတာပါ။
(နည်းနည်း ရင့်သီးတယ်ထင်ရင်ခွင့်လွတ်ပါ။ ဒီလိုပဲရေးတတ်လို့ ပါ။)
ရင့်သီးတယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ Kaung ရဲ့ အမြင်ကို ရေးတတ်သလို ရေးပါ။
ကျနော့် အယူအဆသာလျှင် အမှန်လို့ ယူဆရန် မတိုက်တွန်းပါ။ လက်ခံချင်မှ လက်ခံပါ။
တဖက်မှာလည်း သူတပါးကို မထိခိုက်သရွေ့ လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ခွင့် ယူဆခွင့် ဝေဖန်ခွင့် ထုတ်ဖော်ခွင့်တွေ ရှိပါတယ်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် အများနဲ့မတူတဲ့ အယူအဆ၊ သို့မဟုတ် အမြင်ကို ကိုင်စွဲရုံမျှနဲ့ အများစုက ဖိအားသုံးပြီး ထိုလူနည်းစုကို နှိပ်ကွပ်တာ၊ အရေးယူတာတို့ကို ကျနော့်အနေနဲ့ ရှုတ်ချပါတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံမဆို ယဉ်ကျေးမှုတခု၊ ဘာသာတခု၊ အယူအဆတခုကို ကျင့်သုံးသူ၊ ကိုးကွယ်သူ၊ လက်ခံသူ အများအပြား ရှိရုံမျှနဲ့ ထိုယဉ်ကျေးမှု၊ ထိုဘာသာ၊ ထိုအယူအဆကို မယုံကြည်သူများ၊ မလိုက်နာသူများ၊ မေးခွန်းထုတ်သူများ၊ တမျိုးတဖုံ တွေးတောသူများကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တယ်၊ ပိတ်ပင်တယ်၊ အရေးယူတယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။
စာကြွင်း။.......။(ကျနော့်ရဲ့ ပထမ ကွန်မင့်မှာ သတ်ပုံအမှားပါသွားလို့ ပြင်ဖို့ ကွန်မင့်ကို ပြန်ဖျက်ရင်း Kaung ရဲ့ ကွန်မင့်ကိုပါ မှားယွင်းပြီး ရောဖျက်မိလို့ အီးမေးလ်ထဲက ပြန်ရှာတင်ပေးထားပါတယ်။ ဆောရီးပါ။)